ओली सरकारको १०० दिन पुरा: सरकारले गरेका ५ राम्रा काम र नराम्रा काम (सुचिसहित) ! || सुनौलो नेपाल
ओली सरकारको १०० दिन पुरा: सरकारले गरेका ५ राम्रा काम र नराम्रा काम (सुचिसहित) !
काठमाडौं, ११ जेठ । गत फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्व सरकारले आज १०० दिन पुरा गरेको छ ।
निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनका लागि गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरी जनताले सुविधाजनक मत दिएपछि तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा तत्कालिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो ।
यसबीचमा उनी एमालेबाट शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भइसकेका छन् ।गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीसँग अब आफ्नै दलको एकल बहुमत छ । ओलीको एक सय दिनको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी यो पनि हो कि, उनी यसबीचमा करीव दुई तिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
ओली सरकारले एक सय दिन पूरा गरेसँगै उपलव्धीहरुको खोजी पनि हुन थालेको छ । हुन त कुनै पनि सरकारको पहिलो सय दिन उपलव्धीका हिसाबले भन्दा पनि कामको शुरुआतका हिसाबले मुल्यांकन हुन्छ । त्यसमाथि यो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै ल्याएको छ भने बजेट यसै साता पेश हुँदैछ ।
सरकारको सय दिनले केही राम्रा संकेतहरु गरेको छ । यातायात र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका ठूला सिण्डिकेटविरुद्ध सरकारको कारवाही लगभग सफलताको नजिक पुगेको छ । तर, त्यसपछिका विकल्प र जनतालाई सहजकिरणका लागि भने सरकारले अर्को विकल्प दिन सकेको छैन ।
ठूलाठूला परियोजना र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठेक्का ओगटेर काम गर्ने प्रवृतिविरुद्ध सरकारले थालेको कठोर कदम पनि राम्रो संकेत हो । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी प्रसंशोधन गरेर अघि बढे सरकार बलियो र सफल हुनेछ ।
यो सय दिनको बीचमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरु पहिल्याएको र कार्यान्वयनमा जुटिसकेको सरकारका मन्त्रीहरुले दाबी गरेका छन् । विपक्षीहरुले भने यो सय दिनलाई कामभन्दा हल्ला बढि भएको समयको रुपमा आलोचना गरेका छन् ।
सरकारी र विपक्षीहरुको दाबी जे–जस्तो भए पनि यो अवधिमा सरकारले देखिने गरी केही काम पनि गरेको छ भने कतिपय मामलामा भाषण र प्रचारका लागि कस्मेटिक काममा रुमल्लिएर आवश्यक गति दिन नसकेको कुरालाई लुकाउन सकिदैन ।
यातायात भित्रको सिन्डिकेट अन्त्य
सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको केही मन्त्रीहरुसँग निकै चर्को खटपट पनि देखियो । तत्कालिन माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर देखिएन । मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रुपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिइ सचिव सरुवा गरे । यो विषयले धेरै मन्त्रीहरुलाई निराश बनायो । कतिपय मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सचिवहरुले आफूहरुलाई टेर्ने छोडेको गुनासो गरे ।
कर्मचारी परिचालनमा असफल
सरकारले लिएको समृद्धिको योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । तर, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई न हात लिन सकेका छन् न त सुधार नै गर्ने प्रयास गरेका छन् । खटाएको ठाउँमा समेत जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म सरकारले अटेर कर्मचारीलाई कारबाही र जनताको सेवामा दत्तचित्त कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको विषयमा पनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यबृद्वि
नयाँ सरकार बनेसँगै अहिलेसम्म पेट्रोलिय पदार्थमा चारपटक मुल्यबृद्वि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्यमा बृद्वि नभए पनि यहाँ लगातार भाउ बढिरहेको छ । पेट्रोलिय पदार्थको मुल्यबृद्विलाई जनताले निकै नजिकसँग नियाल्छन् । सरकारको यो कदमलाई जनताले रुचाएका छैनन् ।